Ahoana ny famerenana ny findainao araka ny orinasanao
Miaina ao anatin'ny tontolo iray izay nanjary tena ilaina ny fifandraisana, ka izany no mahatonga antsika hifandray hatrany amin'ny alalan'ny solosaina, tablette ary indrindra ny finday.
Maro ny olona aleon'ny manakarama sarany amin'ny Internet mialohan'ny karama, ny hafa mifehy ny fifandanjany amin'ny ampahany kely tsindraindray, na izany na tsy izany, ny famerenam-bola dia mbola dingana ilaina ho an'ny rehetra.
Ny orinasam-pifandraisana dia manolotra anao fomba isan-karazany hamerenana finday, azonao atao ny mamerina mamerina ny fifandanjanao amin'ny findainao amin'ny Internet, amin'ny alàlan'ny antso na mivantana amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny masoivoho nahazo alalana.
Lazainay aminao ny zava-drehetra momba ny famerenam-telefaona an'ireo orinasa lehibe ao anatiny sy ivelan'i Espaina.
Top up finday an-tserasera
Amin'izao fotoana izao, azo atao ny mamerina mamerina ny fifandanjanao amin'ny findainao amin'ny fampiononana ao an-tranonao na miasa miaraka amin'ny fanampian'ny solosaina manana fidirana aterineto.
Ny ankamaroan'ny orinasam-pifandraisana dia mamela anao hitantana ny recharge finday amin'ny fomba toy izany, tsy any Espaina ihany, fa na aiza na aiza manerana izao tontolo izao ao anatin'ny segondra vitsy.
Ny asa hamerenana ny finday an-tserasera dia tena mora, mandehana fotsiny amin'ny tranokalan'ny mpandraharaha finday, soraty ny laharan-telefaona sy ny fifandanjana hamerenana.
Miaraka amin'ity rafitra ity dia manana tombony ianao amin'ny fitahirizana fotoana betsaka azonao lanina amin'ny raharaha lehibe kokoa.
Azonao atao koa ny mampiakatra ny volanao amin'ny findainao. Tokony hanana solosaina iray manana fidirana amin'ny tambajotra ianao. Amin'ny ankapobeny, maimaim-poana ny fampiharana ary azo alaina amin'ny iOS (ao amin'ny App Store) sy Android (ao amin'ny Google Play), alaivo izany ary avereno avereno ny findainao isaky ny tianao.
Makà fifandanjana finday
Na dia amin'ny aterineto aza ny fomba mora indrindra amin'ny fanampim-bola, misy ihany koa ny rafitra nentim-paharazana hividianana crédit. Azo averina amin'ny:
Hafatra an-tsoratra (SMS)
Fivarotana sy ivon-toerana nahazoana alalana
Serivisy famerenam-bola mandeha ho azy
Famindrana ny fifandanjana
Na dia tsy mitovy aza ny operatera sasany amin'ny dingana, dia mitambatra amin'ny tanjony izy ireo: hamerenana ny fifandanjana.
Manaraka izany, mamela lisitra ho anao izahay mba hahafahanao mianatra amin'ny antsipiriany ny dingan'ny famerenam-bola amin'ny finday amin'ireo mpandraharaha finday lehibe indrindra any Espaina:
Ahoana ny fomba hamerenana ny Oi Brezila
Reload Express TV
Amboary ny Paysafecard
Amboary ny carte prepaid Postepay
Ahoana ny famerenana amin'ny laoniny Iliad
Fandoavam-bola mialohan'ny Telekom
Culture Nuri card recharge
Hamarino ny fifandanjan'ny finday Hazavainay tsikelikely ny fomba hanaovana izany!
Recharge Claro Arzantina
Amboary ny finday Jazzpanda
Recharge Digitel finday
Amboary ny finday amin'ny Cubacel
Recharge Pepephone finday
Ahoana ny fomba hamerenana indray ny República Móvil?
Avereno avereno ny finday MásMóvil. sarany
Amboary ny finday avy amin'ny bankinao
Na dia vitsy aza ny olona mahafantatra izany, ny banky dia manolotra serivisy famerenam-bola azo antoka amin'ny finday. Ny marina dia mihamaro hatrany ireo sampan-draharaha manamora ny fandoavana ny vola ho an'ny mpanjifany.Ity serivisy ity dia omena amin'ny ATM, biraon'ny banky na avy amin'ny tranokalan'ny sehatra banky mba tsy hivoaka ny trano.
Ny banky nentim-paharazana any Espaina dia nanome an'io serivisy io nandritra ny fotoana ela. Na izany aza, mbola tsy nampiditra ity teknolojia ity tao amin'ny rafitra misy azy ireo banky tanora hafa. Andeha hojerentsika eto ambany hoe iza no banky azo antoka indrindra hamerenana ny volanao amin'ny findainao.
Ny ankamaroan'ny banky koa dia manolotra serivisy banky finday. Miaraka amin'izany, azonao atao ny mamelona ny fifandanjanao na aiza na aiza misy anao, avy amin'ny fampiononana amin'ny findainao. Amin'ny ankapobeny, ny lisitr'ireo mpandraharaha finday azo averina amin'ny alàlan'ity fomba fiasa ity dia midadasika, ka tsy misy avela.
Amboary ny carte prepaid Hype
Amboary ny Aldi Talk
Amboary ny finday amin'ny karatra
Recharge BBVA finday
Recharge Santander finday
Top up finday avy amin'ny ING
Recharge La Caixa finday
Recharge finday ivelan'i Espaina
Ankehitriny dia tena mora ny famerenam-bola finday ivelan'i Espaina. Rehefa mandeha any ivelan'i Espaina ianao dia afaka manohy mifandray amin'ny fianakaviana sy ny namana tsy misy olana. Amin'izao fotoana izao, misy mpandraharaha telefaona samihafa eny an-tsena izay manome ity serivisy ity amin'ny fomba mahomby.
Ary koa, raha manana namana sy fianakaviana any amin'ny firenena hafa ianao, dia azonao atao koa ny mandefa azy ireo ny fifandanjana amin'ny alàlan'ny fandoavana euro. Ny fomba tsara indrindra hamerenana ny findainao any ivelany dia amin'ny alalan'ny tranonkala, amin'ny fampiasana solosainao na fampidinana fampiharana amin'ny findainao.
Misy ihany koa ireo toerana mifanatrika izay ahafahanao mandoa trosa amin'ny finday any amin'ny firenena hafa. Ny habaka na toeram-piasana misy ny serivisy dia: foibe fiantsoana, kiosk, serivisy na fivarotana.
Fantatray fa mety ho sarotra ny miala amin'ny olon-tianao, saingy noho ny herin'ny fifandraisan-davitra dia afaka mahatsapa ho akaiky azy ireo ianao. Eto izahay dia mampiseho safidy maromaro hifandraisana amin'ireo olon-tianao.
Recharge finday avy any Però
Recharge finday avy any Chile
Amboary ny finday mankany Meksika
Avereno ny findainao any Venezoelà
Avereno ny finday mankany Ekoatera
Top up finday avy any Bolivia
Amboary ny finday ho any Kolombia
Rebtel finday recharge tsy misy komisiona
Recharge Telcel mora sy haingana
Avereno mora sy haingana ny finday Suop
Amboary ny Movilnet finday
Top up finday avy any amin'ny Repoblika Dominikanina
Amboary ny finday mankany Kiobà
Fomba hafa hafa hamerenana finday
Ny safidy hamerenana ny fandanjana ny findainao isan'andro dia lehibe kokoa. Ireo mpandraharaha an-telefaona dia manolotra anao fomba isan-karazany hamerenana finday, rehefa tsy afaka miditra amin'ny tambajotra ianao. Ohatra, ireo masoivoho nahazo alalana izay manolotra serivisy famerenam-bola ho an'ireo mpandraharaha telefaona samihafa na ireo fivarotana ahafahanao mividy karatra mialoha.
Ireo karatra voaloa vola ireo dia tonga miaraka amin'ny vola samihafa izay mamela anao hisafidy ny habetsaky ny vola tianao hampidirana ny findainao. Ny fampiasana azy ireo dia tsotra, tadiavo fotsiny ny kaody fampahavitrihana sy ny toromarika recharge ao ambadika.
Avereno na mividy karatra mialohan'ny karama ao amin'ny: kioska, biraon'ny paositra na varotra, fivarotana manokana, tobin-tsolika, fivarotana lehibe, fivarotana lehibe, masoivoho fitsangatsanganana, foibe fiantsoana, sns.
Internet finday tsy misy fetra
Misy sarany mamela ny mpampiasa azy mijery sy misintona tsy voafetra. Ao amin'ny tsena dia misy mpandraharaha manolotra gigabytes tsy misy fetra na miaraka amin'ny angon-drakitra be dia be, mitazona amin'ny ankamaroan'ny tranga ny hafainganam-pandehan'ny navigateur.
Amin'ny ankapobeny, ireo karazana sara ireo dia azo atao ao anatin'ny fonosana. Any Espaina, ny sasany amin'ireo orinasa manolotra fitetezana tsy misy fetra na tsy voafetra dia: Vodafone sy Yoigo. Ny tsara indrindra dia azonao atao ny mampiasa azy ireo any amin'ireo firenena hafa ao amin'ny Vondrona Eoropeana.
Misy ihany koa ireo mpandraharaha izay na dia tsy voafetra aza ny sarany dia manana isa betsaka gigs saika tsy misy fetra mba hivezivezy milamina mandritra ny volana. Anisan'ireny orinasa ireny ny: Movistar, Orange, Simyo, Lowi, MásMóvil ary República Móvil.
Ny vidiny eo amin'ny sarany dia hiovaova arakaraka ny angon-drakitra omen'ny orinasa telefaona. Ireo dia manomboka amin'ny fitetezana voafetra ka hatramin'ny saika tsy misy fetra ka hatramin'ny 50 Gb. Vahaolana ho an'ireo mpampiasa mampiasa ny Internet.
Fampahalalana momba ny cookies
Top up Mobile 2022 - Ahoana no hamerenana tsikelikely ny findainao